Izibhendi njengezilwanyana zezilwanyana Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Izigulane njengezilwanyana zezilwanyana - IiNzuzo
Ngubani othembisa ukuba yisigcawu njengepilesi, kufuneka azi ukuba akayiyo into yokudlala. Isicabangca sinokufakwa kwisandla, kodwa ngokuyinkunzi isilwanyana sikhetha ukuhlala kungaphazamiseki kwi-terrarium.
Ukuba isandla sifinyelela kwi-terrarium, oku kubangela uxinzelelo lwezigulane, kwaye isilwanyana singaluma. I-terrarium apho igcawu igcinwa kufuneka ibe ne-footprint ye-30 × 40 centimeters. Ukuphakama kufanele kufane ne-50 centimeters. Ngethuba lokuxubusha, isilwanyana akufanele sondliwe.
Ngaphandle koko, ukutya kwezigulane kubandakanya izinambuzane kunye nee-arachnids eziphilayo, ezinjengeenkumbi ezingathengwa kwiivenkile zengcali. Ukongezelela, kufuneka uhlale amanzi aneleyo. Isimo sengqondo sesicacisi silula. Izilwanyana azidingi ukushisa okunomsola kwaye kufana ne-bark mulch njengephantsi komhlaba.
Ziziphi izigulane ezifanelekileyo ukugcina?
Iintlobo zezilwanyana ezinqabileyo ezikhethiweyo njengepilesi, ziyi-tarantula ebomvu ye-chile, kunye ne-spider-foot footed tarantula. Ixesha langaphambili liyi-intshi ezintandathu ubude kwaye lixolo kwaye luzinzile. I-tarantula ebomvu ye-chile ikhula ngokukhawuleza kwaye ikhefu ixesha elide kunye nokutya. Ukutya okukhethiweyo kwesi sifuncwane sendlu kungenambuzane kunye namagundane amancinci.
Isiqulatho esinomlambo obomvu sinomthi wesibhakabhaka sentaka kunye neminyaka ukuya kwi-15 iminyaka. Ukutya okukhethiweyo kwesi sihlunu sesinhlambi okanye iindiza. Kwakhona, i-tarantula ebomvu yaseMexico inotywala kakhulu kakhulu njengento yezilwanyana kwaye ikhetheke kakhulu kubaqalayo njengesiqulatho sokuqala. Uyondliwa ngamacricket okanye ezinkuni.
Ziyayibiza ntoni iincinci?
Ngokuxhomekeka kwiintlobo kunye nobukhulu kunye neentlobo, i-tarantula iindleko ukuya kwi-200 Euro. I-terrarium efunekayo kwiindleko zesicabangca phakathi kweeyure eziyi-10 ne-euro, kuxhomekeke kubukhulu bayo. ukuba eze ezantsi, i-15 ilitha yamanki e-bark, ihlala izilwanyana zokutya.
Izibhenca zihlambulukile kwaye zithule
Awudingi indawo enkulu yokuhlala
Ukujonga izicabucabu kunomdla
Isimo sengqondo esingabizi
Abantu abaninzi banokuzihlambalaza ngeengcambu kwaye bane-arachnophobia yangempela. Nabani na onesigcawu njengesilwanyana, kufuneka alindele ukutyelela, obuyela ekhaya evela kwiziqholo ezinyanyekayo, "ejikeleza" apho. Yodwa i-spider ishukumisa ukuphazamiseka okukhulu kunye nokwesaba kubantu abaninzi.
Ngokukhawuleza ukukhwaza ngeenwele "abahlaziyi" abaqhaqhazelayo emhlabeni, baninzi bamisa iinqununu. Ngenxa yoko akufanele uhlale utshela isivakashi ukuba unesicangci njengepilesi.